အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သင် သေသွားခဲ့သော်..........
6 Responses to “သင် သေသွားခဲ့သော်..........”
အသက်ရှင်သန်နေစဉ်အတွင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်။ ချောလည်း ဘ၀မှာ အေးချမ်းအောင်မြင်မှုများနဲ့ ပြည့်စုံပါစေရှင်။
just browsing the web.....
၁၀ တန်းတုန်းက သင်ရတဲ့ သင်သေသွားသော် ကဗျာကလေးကို အမှတ်ရမိတယ်။ ကဗျာဆရာကတော့ မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေပြီ။ အချုပ်တန်း ဆရာဖေလား မသိဘူး
စိတ်ချ ညီမလေးကတော့ ငွေနောက်ကို အဲဒီလို ဘယ်တော့မှ လိုက်ဘူး :)
Yeah ...... I don't want money so much ......
the last sentence is really nice. No matter how large the land he worked for, all he can use is only6feet,lolz